Yiziphi izinto ezakha isu lempumelelo lezokuxhumana? | Martech Zone
ULwesibili, April 28, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ntambama, bengihleli nabaholi abathile kwezamabhizinisi, kwezokuxhumana nakwezedijithali futhi besikhuluma ngalokho okudingekayo ekumaketheni okuyimpumelelo. Isivumelwano esasimangalisa sasilula impela, kepha uzomangala ukuthi zingaki izinkampani ezilwayo… ukuqala kuphi.
Sabelane ngezindaba zezinkampani ezingaziqondi iziphakamiso zazo zenani, kepha zazithenga amasayithi amasha. Sihlanganyele izindaba zezinkampani ezingenakho ukuqondanisa kokuthengisa nezokumaketha, futhi bezingajabule ngemizamo yazo yokumaketha. Futhi-ke, izingqinamba ziyagqagqana futhi zinanela ngecebo lezokuxhumana - lapho izikhala zakho zikhula ngosayizi omkhulu futhi zizwakala kuwo wonke umuntu.
Siyabonga okuhle ukuthi abanye abathengisi bacabanga ngokufanayo. Uma ubheka ngokucophelela ifayela le- Izici Eziyisikhombisa Zempumelelo Zamasu Ebhizinisi Lomphakathi kusuka kubaholi bemicabango uBrian Solis noCharlene Li, kufanele kucace bha ukuthi kufanele wakhe isisekelo esihle namasu akhelwe futhi aguquka.
Izici Eziyimpumelelo Eziyisikhombisa zeQhinga Lezebhizinisi Lomphakathi
Chaza konke izinhloso zebhizinisi.
Sungula umbono wesikhathi eside.
Siqinisekise ukwesekwa kwabaphathi.
Chaza ifayela le- isu imephu yomgwaqo.
Sungula ukubusa nemihlahlandlela.
Abasebenzi abaphephile, izinsiza, nokuxhaswa ngezimali.
Tshala imali ku ubuchwepheshe amapulatifomu aguqukayo.
Izikhathi eziningi sibuka amaklayenti edonsa kanzima ngoba imvamisa aqala ngakolunye uhlangothi… athenge isisombululo, abese ethola ukuthi adinga ukusisebenzisa, bese ebhekabheka ngenqubo, amasu nesabelomali, futhi ekugcineni athole ukuthi izinhloso nombono kuzoba yini . Argh!
Kungakho futhi singaphumi ngesango simemezela ipulatifomu ethile ehamba phambili emakethe. Ububanzi bezici, izinzuzo, ubunzima kanye nezindleko zamathuluzi ezinkundla zokuxhumana kufanele zihlaziywe futhi zenzelwe izidingo zebhizinisi, izinsizakusebenza nombono. Akuvamile ukuthi sincome amathuluzi ahlukene ezinkampani ezifanayo ngemuva kokuthi sihlaziye lezi zinto.
Landa i-ebook kaBrian noCharlene - Izici Eziyimpumelelo Eziyisikhombisa zeQhinga Lezebhizinisi Lomphakathi ukubhekisisa kahle ukuthi yini edingekayo ukuthuthukisa isu lezinkundla zokuxhumana eliyimpumelelo.
Tags: ubrian solischarlene liumbono wesikhathi esidesocial mediaimali yezokuxhumanaizinhloso zokuxhumana nabantuimithombo yezokuxhumanaumgwaqo womphakathi wezokuxhumanaabasebenzi bezokuxhumanaisu lokuxhumana kwezenhlaloimpumelelo yezokuxhumanaubuchwepheshe bezokuxhumanaumgwaqo wamasu